Muxuu amiirka boqortooyada Ingiriiska ugu socday dhul ay miino ka buuxdo? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Muxuu amiirka boqortooyada Ingiriiska ugu socday dhul ay miino ka buuxdo?
Muxuu amiirka boqortooyada Ingiriiska ugu socday dhul ay miino ka buuxdo?
Prince Harry, oo u jira safka dhaxal sugeyaasha boqortooyada Ingiriiska ayaa booqasho uu ku marayo Koonfurta Qaaradda Africa ku daray waddanka Angola, si uu u dardar galiyo dadaallada ku aaddan in miinooyinka dhulka ku aasan la bixiyo ama la burburiyo.
Amiirka ayaa raacay raadki hooyadiis, Princess Diana, oo sanadkii 1097-kii ku lugeysay dhul qeyb ahaan miinada looga saaray. Sawirrada laga qaaday xilligaas ayaa caan ka noqday dunida oo idil.
Miinooyinka dhulka ku jira ayaa wali sii galaafta nolosha kumannaan qof oo ku nool dalal badan oo ku yaalla adduunka.
Hadaba xagey miinooyinka uga jiraan caalamka, maxaase horumar ah oo la sameeyay?
Princess Diana ayaa aad loogu yaqanay shaqooyinkeeda dhinaca samafalka, waxayna fulin jirtay howlo inta badan ka qarsan indhaha dadweynaha.
Tusaale ahaan, sanadkii 1987-kii waxay markii ugu horreysay UK ka furtay xarun caafimaad oo loogu adeego dadka la xanuunsan HIV/Aids.
Tallaabadaas ayaana baddashay fikraddii laga qabay cudurkaas.
Inay xoojiso wacyigalinta ku sabsan miinooyinka waxay ahayd howsheedii ugu weyneyd ee ay qabatay markii ay isfureen amiirka Wales sanadkii 1996-kii.
Muddo tobannaan sano ah ayaa miinooyinka dhulka lagu aaso loo adeegsan jiray dagaallada sokeeye.
Kuwo badan oo iyagoo aan qarxin ay dagaallada istaageen ayaa dilayay ama curyaaminayay dadka ku joogsada marka ay lugeynayaan ama gawaarida ay saaran yihiin.
Sawirradii laga qaaday iyadoo la joogta dadkii ku curyaamay qaraxyada miinooyinka intii ay ku sugneyd Angola ayaa muujiyay dhibaatada ka dhalata hubkaas meelo badan ku aasnaa.
Prince Harry ayaa intii uu socdaalkiisa ku guda jiray waxa uu miinooyinka dhulka ku aasan ku qeexay “dhaawacyo aan bogsooneyn oo laga dhaxlay dagaallada”.
Maxay yihiin miinooyinka dhulka imisa qof ayeyse dileen ama dhaawaceen?
Miinooyinka waa bambooyin qarxa oo dhulka ku jira. Waxay leeyihiin hab loo diyaariyay inay u qarxaan, intooda badanna waxaa laga hoos mariyaa ciidda kore, ama dhulka dushiisa ayaaba la dhigaa.
Waxaa jira labo nooc oo miino ah: tan dadka loogu talagay, oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in qofkii ku istaaga ay ku qaraxdo, iyo Miinada loogu tala galay gawaarida, taasoo gaarigii ku istaaga ku qaraxda.
Markii ugu horreysay miinooyinka waxaa loo adeegsaday Dagaalkii Koowaad ee Aduunka, balse waxyeelladoodu waxay soo xoogeysatay wixii ka dambeeyay 1960-meeyadii.
Countries with highest number of casualties from mines in 2017
This data includes serious injury and death Source: Landmine Monitor 2018 report
In si aan kala sooc lahayn miinoyinka dhulka loogu aaso waxay qeyb ka noqotay qorshaha milatariga, arrintaasna waxay nolosha ku adkeysay dad badan oo shacab ah.
Qiyaastii 60 waddan ayey wali ka buuxaan miinooyinka loogu talagalay inay dadka ku qarxaan.
in ka badan 120,000 oo ruux ayaa ku dhintay miinooyin dhulka ku aasan oo ku qarxay intii u dhaxeysay sanadihii 1999-kii ilaa 2017-kii, sida ay sheegtay hay’ad cilmibaaris ku sameysa waxyeellada ka dhalata miinooyinka.
Ku dhawaad kala bar ka mid ah dadka ku dhintay qaraxyadaas ayaa carruur ah, kuwaasoo 84% ka mid ah ay wiilal yihiin. Dadka rayidka ah ee ku dhinta qaraxyada miinooyinka ayaa lagu qiyaasay 87%.
Xagey ku jiraan miinooyinka ugu badan?
Guud ahaan dunida, kumannaan miino ayaa wali dhulka ku jira.
Angola waxay ka mid tahay dalalka ay ku aasan yihiin miinooyinka ugu badan caalamka, maadaama uu waddankaas dagaal sokeeye ka socday intii u dhaxeysay 1975-kii ilaa 2002-dii.
Hay’adda samafalka Halo ee sameysa howlaha miino saarista ayaa sheegtay inaysan macquul ahayn in si sax ah loo ogaado goobaha ay miinooyinka ku jiraan ee dalkaas, laakiin waxay ku guuleysatay inay saarto ilaa 100,000 oo miino tan iyo sanadkii 1994-kii.
Mas’uuliyiinta howlaha miinooyinka ee dalka Angola ayaa sheegay inay jiraan ilaa 1,200 oo goobood oo ay miinooyinka ugu jiraan si aan kala sooc lahayn.
Previous articleMadaxwaynaha Jabuuti o Madaxda Shirka New York ka codsaday inay tageeran rabitaankiisa
Next articleNin Suufi Masiixi ah o 3000 km u lugeeyay Si u Inqilaab ugu sameeyo Putin,ka Ruushka